Lenhle ka ngokuphelele kunoma yiliphi izwe kuncike ibutho kazwelonke. I ukulwa amakhono ke, usongo kancane ukulondeka kuleli zwe. Kodwa kuyaqondakala ukuthi ibutho - umqondo uhlelo, okuyinto inezici yangaphakathi futhi izingxenye ezithile kwesakhiwo. Ngasinye salezi zici inikezwa inamba imisebenzi ethize edingekayo ukuvikela isimo. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ibutho efeza imisebenzi ebalulekile sempi futhi nenkathi yokuthula. In the version zakudala, ke inezigaba eziyisisekelo ezimbalwa, okuyilezi: Navy, Army, Air Amandla.
Emazweni amaningi asethuthukile, kukhona nezinye amabutho, isibonelo, kukhona isikhala Russian Federation. Ngasese ukwaba wamabutho akhethekile elite, lesiniketwe imisebenzi ethize. Kuyinto indlela okwakheke ngayo kazwelonke enjalo lempi Russian Federation kuzoxoxwa ngakho esihlokweni ngezansi.
Uyini amabutho Russian elite? Abantu abaningi abazi ngisho uqonde okushiwo ibinzana esimeme. amabutho Elite Uyi legatsha, ingxenye ehlukile ye hlobo (inkampani, ukuhlukana, Ibutho, njll). I engavamile ukuthi le ngxenye yebutho kazwelonke ungaphakathi ngezinga eliphezulu ukulungela kunamanye izingxenye amabutho ahlomile.
"Amasosha Elite" - kuyinto ngokuphelele Inkulumo lesibonwa. Kuyinto neze fixed ezingeni zomthetho. Ngakho, ukwaba iyiphi amasosha Russian elite kusukela wonke amalungu afanayo amabutho WaseRussia kungaba luyingxenye bokuzisholo. Kuze kube manje, akukho kokuhlaziywa letitsite owawuthi kwakunokwenzeka ukucacisa wedwa amabutho athile.
Njengoba kushiwo ngaphambili, amabutho Russian elite kungukuthi echazwe emthethweni. Ngokuvamile kukhona izilinganiso noma ukuziphatha survey ukusungula amabutho kakhulu ukulwa-ngomumo, ngokuvumelana labantu Russian. Futhi, "elite" ezingeni yempi noma division anganikeza for ubuqhawe bakhe nobuchwepheshe lapho sifeza noma isiphi umsebenzi ukulwa noma enye insizakalo esimweni. Ngezansi sibheka uhlu amasosha Russian elite, okuyinto emhlabeni ayibonwa.
Le nhlangano ine amasiko internal khona kusukela khona umnyango 9th yamaPhoyisa KaHulumeni ye-USSR. Kuze kube manje, isevisi waqoqa ababuthiwe. Lesi sigaba odume kunayo yonke FSO iyona kaMongameli Regiment. Kuthatha cishe 240 ukubuthela ababuthiwe ngonyaka. Izindophi ezinzima ngokwanele.
Udinga ukuba i-enhle kakhulu yokulungisa ngokomzimba, Slavic ukubukeka nokukhula hhayi ngaphansi kuka-180 ngamasentimitha. Kukholakala ukuthi sikaMongameli Regiment - zithuthukisa, ngemva ukunikela umzila ngqo sikaMongameli Security Service sase-Russian Federation.
Isikhala Amandla we Russian Federation
Njengoba sekuzoqala ngekhulu xxi umbuzo isidingo non-contact impi. Isikhala Amandla kukhona umqhele yokuziphendukela kwemvelo. Namuhla, baba esigabeni sokuqala nentuthuko yayo, kodwa-ke, ayakhula ngokoqobo ngu ihora. Umsebenzi oyinhloko amabutho cosmic ukuvikela sendawo yezwe ekuhlaselweni by isikhala zenuzi ezicitshwayo noma ezinye izikhali idinga babe nesu. Okwamanje eRussia azikho izikole ezikhethekile, okuyinto ukuqeqesha Ochwepheshe lezi amabutho. Izishoshovu ethathelwe yodumo amanyuvesi lobuchwepheshe eMoscow.
amabutho Elite lwamagama Russian okuye ethulwa okungenhla, ungaphethi ujabulele leso sithakazelo onobudlova phakathi kwamalungu kanye amasosha, njengoba elihamba zasolwandle we Russian Federation. ezingaphansi kwayo kungokukaJehova emabuthweni asolwandle we Russian Federation.
Bangabaholi onekhono kakhulu futhi ebulalayo. Namuhla, i- Navy-Russian has mabutho ezinhlanu: Sea, le iCaspian, Northern, yePacific aseBaltic. Ukuze zijoyine asemanzini, kuzomele yaba nezigaba ezimbili ukuncintisana. Okokuqala, ngisho ngesikhathi ukusatshalaliswa yezempi kudingeke ukuba ukukhethwa ekhethekile ukusekela ku ukubuthela ithimba ngoba amabutho Marine Corps. Okwesibili, ngqo ngoxhaxha kudingeka ukusungula uqobo okweqhawe, nginenhliziyo, ngoba uthathe ubunzima engqondo nempilo lwabantu Marine Corps.
Strategic Missile Amandla
ukuthandwa Kakhulu babe missile amabutho kwenjongo zamasu. Sinenkosi imisebenzi ethile kanye nemisebenzi, okuyilokho, eqinisweni, ngokuba alikho futhi elinye zokwakheka lempi Russian Federation. Ngokushesha kufanele siyavuma ukuthi amabutho missile - ngokuphelele umsebenzi sedentary e indlu noma a enkanjini. Nokho, ungase uthole lapha umuntu nge ikhono elingavamile mathematics ne-physics. Amasosha yokuqeqeshelwa impi ngenkani ayisetshenziselwa cishe. Ngokuyinhloko, Lwamasu Missile Amandla abuthele asesandleni sakhe izikhulu.
Kuze kube yimanje, Russian Federation has mayelana eziyisithupha izinhlobo yezikhali ezicitshwayo lempi. Kufanele kuqondwe ukuthi amabutho missile - main yesiteleka amandla. izitshalo banamuhla bangasebenzisa emizuzwaneni embalwa nje ukushaya laba yizicucu cishe kunoma yiliphi izwe emhlabeni.
Missile amasosha - kuyinto ukuziqhenya ezweni lethu. Basuke behlukene wonke umzimba, kanye nezinye amabutho elite Russian. Usezingeni zokwakheka professional lempi Russian Federation akugcini lapho. Entendeni iminyaka eminingi ebanjwa amabutho anekhono kunazo neselula. Wabatshela ngezansi.
Emazweni amaningi, akukho lokufikela amabutho. Bamane nje ukwaba. Division yalolu hlobo abelwe kule Army. Ngokwesibonelo, e-America kukhona iyunithi "ulwandle ingonyama", okuyinto kuthiwa kubangelwa US Navy. Kodwa ezweni lethu amabutho sisemoyeni, noma amabutho sisemoyeni, njengoba bebizwa kanjalo - is elite kakhulu amasosha Russian. Abameleli beNdikimba "berets blue" abaye bahlanganyela cishe zonke izingxabano, kolunye uhlangothi owawungumnyaka Russian Federation. amabutho Airborne ezisebenza ngemuva imigqa isitha. Ngakho-ke, basuke kubhekwe ukuba mobile kakhulu futhi isabele. Kukhona futhi kokufika amabutho ezikhethekile.
Ukuze uthole amabutho elite kakhulu Russian kudingeka ukuqeqesha kanzima futhi eside. Ochwepheshe abaningi ukweluleka ukuba aqale ukuzilolonga ngokomzimba ngaphambi ukuqala lokuya empini. I VDV uthole kokubili ababuthiwe nezikhulu asebeqedile izikole ezikhethekile. Ulwazi iyiphi karate noma khona lezempi kanye wezemidlalo. Lokhu legatsha le Russian Federation ku ethembisayo ngenxa ke waqoqa abasebenzi kule GRU, FSB nezinye top-mfihlo ekhethekile injongo amayunithi.
Sibukeze amabutho Russian elite. Phawula ukuthi lolu hlu zingase zishintshe ngokuhamba kwesikhathi. Noma kunjalo, isilinganiso kusekelwe amaqiniso kanye ukulwa amandla ezinemininingwane labantu survey. Lesi sihloko sibuye waphendula umbuzo mayelana nendlela ukungena amabutho Russian elite. Ekuphetheni, siye sinezele ukuthi ibutho - eningi abayisizwe esinamandla futhi okunenjongo. Uma ukholelwa wena ngamaphesenti ayikhulu, elite amabutho Russia ulinde!
Yezinjongo eziyinhloko e-RSE. Enobunye isimo uhlelo lokuvikela ekucwileni ezikweletini izimo eziphuthumayo
Amabutho sesitimela: War komzila
Kusigaba izimbotshana Black: incazelo, degree of ekilasini kanye nokwelashwa
Idlalwa kanjani i-'mafia'?
Samara. Izikhangibavakashi lomuzi kanye nesifunda
Anadyr - inhloko-dolobha Chukotka
Amaphupho Vacations kuyona (Egypt, Sharm el-Sheikh): incazelo ihhotela
Laser biorevitalization isikhumba asidi i-hyaluronic: ukubuyekezwa, Izimo, izithombe